Ukushoda kwezinto kuzothinta i-iPhone 13 ne-iPad | Izindaba ze-IPhone
Ukushoda kwento kuzothinta i-iPhone 13 ne-iPad
ULuca Maesteri, wabuzwa mayelana nokushoda kokutholakala kokuhlinzekwa kwesizukulwane esilandelayo sama-iPhones nama-iPads engqungqutheleni yemiphumela yonyaka yezimali. UMaesteri, uchaze ukuthi i-Apple iyabhekisisa ukusweleka kokuhlinzeka okungenzeka nokuthi into ephephe kakhulu ukuthi izogcina ithinta i-iPhone futhi ikakhulukazi i-iPad ngoSepthemba ozayo.
Kungenzeka lokho ukushoda okutholakele kulekota kaJuni kukhulu ngoSepthemba UMaestri uphawule. Lokhu kusho ukuthi imikhawulo ingathinta ngokunengqondo imikhiqizo yabo futhi kulindeleke ukuthi bakwenze ngendlela enkulu kwi-iPad kune-iPhone 13.
Ukulindela kuka-Apple kumele kucatshangwe ngaso sonke isikhathi
Akekho oqiniseke kakhulu ngokulindelwe kunenkampani uqobo Futhi ukuthi ukwazi imininingwane ngenani lemikhiqizo engathengiswa noma yenziwe ngesikhathi sekota, i-Apple iyona ezonikeza izimpendulo. Kuyacaca ukuthi i-Apple idlala amakhadi ayo futhi ngeke ikhombise ubuthakathaka, kepha kuliqiniso ukuthi lo mkhakha uhlushwa ukushoda kwezakhi ngezizathu ezahlukahlukene, kubandakanya nobhadane lwe-COVID-19 oluthinta umhlaba wonke.
Kunoma ikuphi, asethembe ukuthi i-iPhone 13 ayibambezeli njengoba kwenzekile ukubeka izinhlobo zamanje ze-iPhone 12 ngokusatshalaliswa. UTim Cook ngokwakhe wakuchaza lokho basebenza kanzima ukugwema izinkinga ekuhlinzekweni nasekuthengisweni kwezinto. Ngakolunye uhlangothi, ezinye izinto ezisebenzisa i-silicon nazo zizoba nemikhawulo. Konke lokhu ngokusobala kuthinta imboni yonke futhi i-Apple icacile ukuthi kuzoba nzima kepha kungenzeki ngakho-ke bephoqa imishini ukugwema izinkinga ngangokunokwenzeka. Sizobona ukuthi kwenzekani ngemuva kwamaholide ehlobo.
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba ze-IPhone » Ama-terminals we-IPhone » iPhone 13 » Ukushoda kwento kuzothinta i-iPhone 13 ne-iPad
Sebenzisa "Funda okuqukethwe" ukuze i-iPhone ifunde isikrini kuwe